> Resource > Ladnaansho > Dell Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Laptop Dell
Sidee baan ka Laptop Dell ah dib u soo ceshano kartaa Data?
Waxaan leeyahay ka laptop Dell Inspiron. Maalmahan waxaa si tartiib tartiib ah u orday, sidaasi darteed waxaan go'aansaday in ay nadiifiso. Nasiib darro waxaan istareexa ku tirtiray qaar ka mid ah files qiimo leh. Ma jiraa wax aan iyaga u hanato karaa? Fadlan caawi
Mid ka mid ah xalka yahay si loo hubiyo Recycle Bin aad laptop Dell. Haddii faylasha aad tirtiray waa nasiib wanaag waxa ku jira, waxaad iyaga u soo ceshano karaa si fudud. Xalka kale waa in la isticmaalo barnaamijka Dell ah oo xog laptop soo kabashada haddii faylasha aad tirtiray ma aha in Recycle Bin.
Wondershare Data Recovery waa mid ka mid ah doorashooyinka ugu fiican si aad u soo kabsado xogta ka laptops Dell. Sabab kasta oo aad files laptop Dell ayaa laga badiyay, sida ujeeddo ama tirtirka shil ah, drive adag ama formatting xijaab, Baadi nidaamka, waxaad iyaga u soo ceshano karaa Wondershare Data Recovery effortlessly. Muuqaaladan fududahay in la isticmaalo iyo khatar la'aan ah utility sameeyaan hannaanka soo kabashada xogta Dell aan xanuun lahayn. Waxaad u baahan tahay oo kaliya guji dhawr jeer inuu ka soo kabsado noocyo kala duwan oo files ka Dell laptop, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, document files, files email, files audio, files archive, iwm
Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah Wondershare Data Recovery hoos ku qoran.
Qabtaan Dell Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad soo kabsado xogta ka laptop Dell burburtay, waxaad isku dayi kartaa qaadashada ay drive adag oo ku xirmaan computer kale si ay u sameeyaan dib u soo kabashada.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan soo kabashada xogta laptop Dell
Ka dib markii socda Wondershare Data Recovery aad laptop Dell, aad arki doonaa daaqad bilowga 3 hababka soo kabashada. Waxaad ka akhrisan kartaa tilmaamaha faahfaahsan oo iyaga ka mid ah si ay u bartaan sida ay u shaqeeyaan.
Halkan, aynu dooro "lumay Recovery File" mode in ay isku day ah.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo dajiyo barnaamij ku saabsan xijaab aad Dell laptop ee halka macluumaadka ay lumay.
Tallaabada 2 Sawirka xijaab aad Dell laptop ee in la raadiyo files lumay
Halkan waxa aad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan Risaalo aad rabto in aad dib u soo ceshano xogta ka oo guji "bilow" si ay u bilaabaan iskaanka.
Haddii faylasha aad lumeen sababtoo ah formatting xijaab, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho xogta ka laptop Dell
Scan ka dib, dhammaan faylasha recoverable lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala barnaamijka. Waxaad iyaga ku hubin kartaa by "Nooca File" ama "Jidka". Waxa kale oo aad ku eegaan karo helay images hor kabashada aad.
Ugu danbeyn, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan waxyaabaha aad u baahan tahay oo ku dhacay "Ladnaansho" badhanka si ay u soo celin aad laptop Dell badbaadiyo.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo files soo kabsaday in goobaha ay asal.
1 Sababta sababta aad u soo kaban karto xogta lumay ka laptop Lenovo waa in kuwan files lumay waa uun geli karin on your laptop Lenovo. Waxay si joogto ah lagu lumin doonaa oo keliya marka xogta cusub iyaga overwrites.
2 Haddii aad Lenovo mar dambe reboot karo, waxaad weli soo kaban karto xogta ka by qaadashada ay drive adag oo isku xira la computer kale.